iPhone အချင်းချင်း Data ကူးဖို့ Cable ကို ပေးသုံးလာတော့မယ့် Apple
3 Jul 2019 . 1:00 PM
Apple ကနေ အခုအချိန်မှာ iOS Device တွေအတွက် Software Version အသစ်ဖြစ်တဲ့ iOS 13 Beta3ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Update က Performance Improvement တွေပြုလုပ်ပေးထားသလို Bug Fix တွေလည်း ပါဝင်နေမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အဆိုပါ iOS 13 Beta3မှာ iPhone ကို စတင် Setup ပြုလုပ်တဲ့ Setup App ထဲမှာ ပြောင်းလဲမှုအချို့ကို မြင်တွေ့လာရပါတယ်။ ဒီ Setup App ဆိုတာ iPhone ကို Reset ပြုလုပ်ရင် ဒါမှမဟုတ် iPhone အသစ်ကို စတင် Setup ပြုလုပ်တဲ့ App တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ iPhone ကို Setup ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် iTunes ဒါမှမဟုတ် iCloud Backup ကနေ Restore ပြုလုပ်နိုင်သလို တခြား iDevice တစ်ခုကို ဘေးမှာထားပြီး Apple ID Account အတူတူဝင်ထားရင် Data တွေက Wireless နဲ့ ကူးပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ iOS 13 Beta3မှာတော့ Apple ကနေ iDevice အချင်းချင်း Data ကူးပြောင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းသစ်ကို ထည့်သွင်းလာနိုင်ပြီးတော့ အဆိုပါ နည်းလမ်းက Cable ကို အသုံးပြုလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Setup App Code ထဲမှာ iPhone တစ်ခုနဲ့တစ်ခု Cable ကို အသုံးပြုပြီးတော့ Data တွေ Transfer ပြုလုပ်တဲ့ ပုံနဲ့ ဖော်ပြပေးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုထူးဆန်းတာက လောလောဆယ်မှာ Apple ကနေ Lightning to Lightning Cable ကို မရောင်းချထားတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်း iPhone တွေမှာ USB-C ကို အသုံးပြုလာဖို့ ပိုဖြစ်နိုင်လာပါပြီ။
အခု Setup App ထဲမှာ Cable နဲ့ Transfer ပြုလုပ်ဖို့ Code ပါဝင်လာတယ်ဆိုပေမယ့် လောလောဆယ်မှာတော့ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ မရသေးပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာက iOS 13 Stable Version မှ ရရှိလာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Ref : 9to5Mac
OLED Display နဲ့ Xiaomi Mi A3 ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ
by Nigma .5hours ago
K20 Pro ကို ရွှေသားကိုယ်ထည်နဲ့ ဖန်တီးပြီး စိန်နဲ့အလှဆင် ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ Redmi India
by 2B .6hours ago
MediaTek ရဲ့ ပထမဆုံး Gaming Chipset ကို မကြာမီ တွေ့မြင်ရမည်
by Nigma . 8 hours ago
ဒေါ်လာ ၁၅၀ အောက် Android One နဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Nokia 2.2
by Zawyè . 8 hours ago
Redmi Note7ကို Silver Color အရောင်အသစ်နဲ့ ရောင်းချတော့မယ့် Xiaomi
ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ Emoji အသစ်တွေကို ထုတ်ပေးသွားမယ့် Apple